बाइबल परमेश्वरको प्रेरणाले दिइएको हो भन्ने तथ्य – Word of Truth, Nepal
बाइबल परमेश्वरको प्रेरणाले दिइएको हो भन्ने तथ्य
बाइबल सत्य छ भनेर हामी कसरी जान्दछौं
१. बाइबलका विभिन्न नामहरू
परमेश्वरलाई बयान गर्ने विभिन्न नामहरूबाट हामीले उहाँको बारेमा जान्न सक्दछौं। त्यस्तै गरी बाइबलका विभिन्न नामहरूबाट हामीले बाइबलको बारेमा जान्न सक्दछौं; जस्तै,
१) हिब्रू ४:१२ मा बाइबललाई “______________________को ____________” भनेर जनाइएको छ। बाइबल केवल मानिसका राय तथा व्यक्तिगत विचारले भरिएको पुस्तक होइन। यो परमेश्वरको वचन हो। परमेश्वर नै यो अचम्मको पुस्तकको लेखक हुनुहुन्छ। रोमी १०:१७ मा पनि पढ्नुहोस्।
२) २ तिमोथी २:१५ मा बाइबललाई “__________को ____________” भनेर जनाइएको छ। यो पुस्तक सत्य छ, पूरै सत्य छ, यसमा सत्य मात्र छ। यो पूर्ण रूपमा विश्वासयोग्य छ। यसमा न कुनै त्रुटि छ न ता कुनै अन्तरविरोध। यदि यो परमेश्वरको वचन हो भने यसमा कसरी त्रुटि हुन सक्छ र?
३) फिलिप्पी २:१५ मा बाइबललाई “____________को ____________” भनेर जनाइएको छ। बाइबल एक “जिउँदो” पुस्तक हो (हिब्रू ४:१२)। यसको सन्देशलाई बुझेर विश्वास गर्नाले जीवनको परिवर्तन हुन्छ (२ कोरिन्थी ५:१७)। बाइबल येशू ख्रीष्टमा केन्द्रित छ अनि ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्ने व्यक्तिसँग अनन्त ____________ हुन्छ (यूहन्ना ६:४७)।
४) रोमी १:२ मा बाइबललाई “प________शा________” भनेर जनाइएको छ। “शास्त्रहरू” भन्नाले “लेखोटहरू” भन्ने बुझिन्छ। “पवित्र” भन्नाले यी लेखोटहरू अन्य लेखोटहरूभन्दा भिन्न र पृथक छन् भन्ने बुझिन्छ। बाइबलजस्तो अरु कुनै लेखोट छैन। बाइबल एक अद्वित्तीय पुस्तक हो। परमेश्वरबाट दिइएको एउटै पुस्तक यही हो। परमेश्वरको वचनलाई हामी सधैं अति उच्च आदर गर्न सकौं (हेर्नुहोस् यशैया ६६:१-२)।
२. बाइबलको बारेमा येशूको गवाही
बाइबलको बारेमा जति येशू ख्रीष्टलाई थाह छ त्यति अरु कसैलाई छैन। बाइबलको बारेमा प्रभु येशू ख्रीष्टले के भन्नुभएको छ त?
१) यूहन्ना १७:१७ मा प्रभु येशूले परमेश्वरको वचन __________ छ भन्नुभयो। येशूको यो भनाइ हाम्रो लागि पर्याप्‍त छ! बाइबल सत्य छ भनी हामी जान्दछौं किनकि परमेश्वरको पुत्रले सो भन्नुभयो! बाइबल परमेश्वरको वचन हो अनि यो सत्य हुनैपर्छ किनकि….
“परमेश्वरले ________ __________ असम्भव छ” (हिब्रू ६:१८)।
“उहाँ ________ __________ नसक्नुहुने परमेश्वर” हुनुहुन्छ (तीतस १:२)।
“परमेश्वर __________ हुनुहुन्छ” (यूहन्ना ३:३३)।
यसको तुलनामा बाइबलले यूहन्ना ८:४४ मा शैतानको बारेमा के बताउँछ हेरौं: “तिमीहरू आफ्ना बाबु शैतानबाटका हौ, अनि आफ्नै बाबुका कुइच्छाहरू पूरा गर्न चाहन्छौ। त्यो शुरूदेखि नै हत्यारा थियो, अनि __________मा रहेन, किनकि त्यसमा __________ छँदै छैन। जब त्यसले __________ बोल्दछ, तब त्यो आफ्नै तर्फबाट बोल्दछ, किनकि त्यो __________ हो र __________को बाबु हो।” यूहन्ना ८:४५-४६ मा येशूले भन्नुभयो, “तर मैले __________ बोलेको हुनाले तिमीहरू मलाई विश्वास गर्दैनौ, तर म __________ बोल्दछु भने तिमीहरू मलाई किन विश्वास गर्दैनौ?”
२) यूहन्ना १०:३५ मा प्रभु येशूले भन्नुभयो, पवित्र शास्त्र __________ हुन सक्दैन। परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा कहिल्यै रद्द वा नष्ट हुन सक्दैन।
३) लूका २४:४४ (मर्कूस १४:४९ सित तुलना गर्नुहोस्) मा प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, “पवित्र शास्त्र __________ हुनुपर्दछ।”
४) मत्ती ५:१८ मा प्रभु येशूले भन्नुभयो, “जबसम्म आकाश र पृथ्वी बितिजाँदैनन्, तबसम्म व्यवस्थाबाट एक __________ अथवा एक __________ पनि, __________ __________नभइन्जेल, कुनै रीतिले बित्नेछैन।” त्यसैले बाइबलमा परमेश्वरले भन्नुभएका सबै कुराहरू निश्चय नै __________ हुनेछन्।
हिब्रू वर्णमालाको सबभन्दा सानो अक्षरलाई “मात्रा” (हिब्रूमा “योद”) भनिन्छ।
माथि हिब्रू लिपिमा “एलोहिम” (प्रमेश्वर) लेखिएको छ। मोशाले उत्पत्ति १:१ मा यही शब्द लेखेः “आदिमा __________________ले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो।” माथि लेखिएको हिब्रू शब्दको सबभन्दा सानो अक्षरलाई गोलो चिन्ह लगाउनुहोस्। तपाईंले भर्खरै एक “मात्रा” लाई चिन्ह लगाउनुभयो।
झण्डै उस्तै देखिने हिब्रू अक्षरहरूबीच स-साना भिन्नता हुन्छन् जसलाई “बिन्दु” भनिन्छ। माथि ६ ओटा हिब्रू अक्षरहरूलाई दुई-दुई गरी तीन समूहमा लेखिएका छन्। प्रत्येक जोडीका दुई अक्षरहरू झण्डै उस्तै देखिन्छन् तर प्रत्येक जोडीको एउटा अक्षरमा केही थपिएको छ जसले उक्त अक्षरलाई अर्कोबाट फरक तुल्याउँछ। त्यो थपिएको भागलाई गोलो चिन्ह लगाउनुहोस् (प्रत्येक जोडीमा यस्तै गर्नुहोस्)। तपाईंले भर्खरै “बिन्दु” लाई चिन्ह लगाउनुभयो।
नेपाली अक्षरको कुरा गरौं। देवनागरी लिपिमा “प” लाई “ष” बनाउन एउटा धर्सो मात्र चाहिन्छ। यदि यो “पेट काट्ने” धर्सो कोर्न छुट्यो भने “कोष” लाई “कोप” लेख्‍न पुगिन्छ। त्यस्तै “दंग” को अनुस्वार (थोप्लो) छुटेमा त्यो “दग” हुन्छ। यसर्थ, बाइबलको हरेक अक्षर र शब्द महत्त्वपूर्ण र सत्य छ। हामीले परमेश्वरको अकाट्य वचनलाई बुझ्नुपर्छ, विश्वास गर्नुपर्छ र आफ्नो जीवनमा उतार्नुपर्छ!
५) मत्ती २४:३४-३५ मा प्रभु येशूले भन्नुभयो कि आकाश र पृथ्वी बितिजानेछन्, तर उहाँको वचनहरू ______________________________________________________।
३. बाइबलको बारेमा बाइबलको गवाही
बाइबलले आफ्नै बारेमा के बताउँछ?
१) २ तिमोथी ३:१६
यस पदअनुसार “सबै पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिइएको हो।” २ तिमोथी ३:१६ को यस वाक्यांशलाई अक्षरशः यसरी अनुवाद गर्न सकिन्छः “सबै पवित्र शास्त्र परमेश्वर-निश्वासित हो।” बाइबल कति मात्रामा परमेश्वर-निश्वासित छ? सही उत्तरमा चिन्ह लगाउनुहोस्: आंशिकरूपमा/पूर्ण रूपमा।
बोल्दा हामी शब्दहरू निश्वासन गर्दछौं। सास बाहिर नफ्याँकिकन शब्द उच्चारण गर्न असम्भव छ। सास रोकेर बोल्ने प्रयास गर्नुहोस् त। त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ? ________________। २ तिमोथी ३:१६ को तार्त्पर्य हो, परमेश्वरले निश्चित शब्दहरू निश्वासन गर्नुभयो। परमेश्वरले पवित्र शास्त्र निश्वासन गर्नुभयो। “सबै ____________________ परमेश्वर-निश्वासित हो” अर्थात् पूरै बाइबल परमेश्वरको मुखबाट निस्की आएको हो! पूरै बाइबल परमेश्वरको वचन हो। “किनकि __________________को ________ले नै भनेको छ” (यशैया ४०:५)। यसलाई भजनसंग्रह ३३:६ सित तुलना गर्नुहोस् जसका निम्न दुई वाक्यांशहरूले एउटै कुराको बयान गर्दै छन्:
“______________________को ____________ले आकाशहरू निर्माण भए र…
…उहाँकै ________को ________ले त्यहाँका ग्रह-नक्षत्रहरू।”
२) २ पत्रुस १:२१
तर कसैले यस्तो आक्षेप लगाउलाः “अरे! तपाईं भन्नुहुन्छ, ‘सबै पवित्र शास्त्र परमेश्वर-निश्वासित हो र पूरै बाइबल परमेश्वरको वचन हो’, तर बाइबल त मान्छेले लेखेको होइन र? बाइबल लेख्‍ने त दाऊद, मोशा, पावल, लूका, मत्ती होइनन् र? अब मान्छेले लेखेको कुरालाई परमेश्वरको वचन भन्न मिल्छ र?”
यसको प्रत्युत्तर २ पत्रुस १:२१ मा पाइन्छः “किनकि कुनै पनि समयमा ______________________ (प्रमेश्वरको वचन) मानिसको इच्छाद्वारा आएन, तर __________________का प____________ __________हरू (मोशा, दाऊद, पावल आदि) पवित्र आत्माद्वारा ______________ पाएर बोले।”
उदाहरणः दाऊदले पवित्र आत्माद्वारा प्रेरणा पाएर भजनसंग्रह २३:१ लेखे। तलको चित्रलाई हेर्नुहोस्।
२ पत्रुस १:२१ मा पवित्र जनहरू “पवित्र आत्माद्वारा प्रेरणा पाएर बोले” भन्नुको अर्थ उनीहरूले पवित्र आत्माद्वारा चलाइएर बोले भन्नु हो। यसैले दाऊदले भजनसंग्रह २३:१ पवित्र आत्माद्वारा चलाइएर लेखे। उनी नजन्मँदै परमेश्वरले दाऊदलाई भजनसंग्रह २३:१ लेख्‍नलाई तयार पार्दै हुनुहुन्थ्यो! यर्मियालाई पनि त्यसरी नै तयार पार्नुभयो। उनको आमाको ________बाट निस्की आउनु अघि नै परमेश्वरले यर्मियालाई तयार पार्दै हुनुहुन्थ्यो (यर्मिया १:५ हेर्नुहोस्)।
दाऊद आफ्नो युवावस्थामा भेडा गोठाला भए। परमेश्वरको प्रेमिलो वास्ता र देखभालको महसुस गर्दै आएका दाऊदले एक दिन यसरी लेखे, “____________ मे____ गु________ हुनुहुन्छ (भजनसंग्रह २३:१)।” पवित्र आत्माले दाऊदलाई यसरी डोर्याउँदै हुनुहुन्थ्यो कि उनले जे-जे लेखे तिनै कुराहरू लेखियोस् भन्ने परमेश्वरको इच्छा थियो। आफ्नो जीवनको अन्ततिर दाऊदले यसरी भने, “प________________का आ________ ____द्वारा बो______________ अनि उहाँको ____________ ________ मुखमा थियो” (२ शमुएल २३:२)। यसर्थ, बोल्ने वास्तवमा को हुनुहुन्थ्यो? ______________________। दाऊदको मुखमा कसको वचन थियो? ____________________________________।
३) यशैया ४०:८ (१ पत्रुस १:२३-२५ र मत्ती २४:३५ पनि हेर्नुहोस्)
परमेश्वरको वचन कहिलेसम्म खडा रहनेछ? __________________________। भजनसंग्रह ११९:८९ मा परमेश्वरको वचन स्वर्गमा ____________ रहन्छ भनिएको छ। कहिलेसम्म? ____________________________।
४) यशैया, यर्मिया, इजकिएल, मलाकी जस्ता अगमवक्ताहरूका लेखोटहरूमानिम्नलिखित वाक्यांशहरू भेट्टाउने प्रयास गर्नुहोस्:
“परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ”: ___________________________________________________
“परमप्रभु भन्नुहुन्छ”: _______________________________________________________
“परमप्रभुको यो वचन मकहाँ आयो” ____________________________________________
यसरी, परमेश्वरले रच्नुभएको पुस्तकभरि उहाँको हस्ताक्षर घरीघरी भेटिन्छ!
किन सबैलाई मुक्तिको खाँचो छ? –...